Exclusive News – Nepal Online Khabar
कुलमान गएपछि यसरी ह्वात्तै बढ्यो विद्युत चुहा’वट – कसले चो’र्दैछ बिजुली ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं : गर्मी लागेसँगै हु’किङ तथा बाइ’पास गरेर बिद्युत चो’री गर्ने क्रम बढेको छ । खासगरी प्रदेश दुई र वाग्मती प्रदेशमा चु'हावट १ प्रतिशतले बढेको हो। जनकपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत बारा, पर्सा, सप्तरी र सर्लाहीमा चुहा’वट बढेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश २ मा एक वर्षअघि चुहा'वट १५ प्रतिशत थियो । अहिले बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशको चु'हावट ७ प्रतिशतबाट बढेर आठ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेशमा खासगरी भक्तपुर र ललितपुरमा चुहावट बढेको हो । चो’री बढेको थाहा पाएर पनि प्राधिकरणले प्रभा'वकारी कदम भने चालेको छैन । उसले चुहा’वट रोकथाममा कोरोना महा’मारीको बहा’नाबाजी गरेको छ । जबकि अहिलेको चुहा’वट कायमै रहे प्रदेश २ मा मात्र प्राधिकरणलाई ७० करोड रुपैयाँको क्ष’ति हुन्छ । असारसम्म प्राधिक|रणको चुहा’वट १० दशमलव २८ प्रतिशत थियो । माघ मसान्तमा बढेर ११ दशमलव दुई आठ
Feb122021 by Nepal KhabarNo Comments
रामकुमारी प,क्राउ गरिएको शीर्ष नेता तर्साउन मात्र गरिएको हो ।
काठमाडौं । सरकारले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार प,क्राउ गरेको पाँच घन्टापछि रि,हा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आ,लोचना गरेपछि नेत्री झाँक्रीलाई राज्यवि,रुद्ध कसुरको आ,रोप लगाएर प,क्राउ गरिएको हो । महानगरीय प्रहरी अ,पराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले उनलाई पाँच घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी लिखित बयान लिएर छाडेको छ। झाँक्रीको प,क्राउपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार भएको टिप्पणी भइरहेको छ। झाँक्रीको प,क्राउलाई लिएर सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारी रबैया अव्यिक्ति स्वतन्त्रताप्रति कठोर देखिएको भन्दै आ,लोचना गरेका छन् । झाँक्रीलाई प,क्राउ गरेर सरकारले शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको आ,रोपसमेत लागेको छ। ‘झाँक्रीको प,क्राउ सामान्य विषय होइन । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश देखाएको छ भने शीर्ष नेताहरूलाई समेत तर्साउन खोजेको आभ
Oct282020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले रअ प्रमुखसँग भेटेको भनेर लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले गरेको टिप्पणीमाथि जवाफ फर्काएका छन् । लेखक संग्रौलालाई ट्विटरमै जवाफ दिँदै बाबुरामले भनेका छन्,‘खगेन्द्र सॅग्रौलाजस्ता बौद्धिक व्यक्ति समेत आफ्नो कान नछामी कागको पछि दौडिने देशमा अरूबाट सत्य/न्याय,बुद्धि/विवेकको के अपेक्षा गर्नु?भीम मल्ल र भीमसेन थापालाई त्यत्तिकै मा,र्ने मेरो देश! बिपी र पिएललाई बाचुन्जेल दलाल र ग,द्दार भन्ने र मरेपछि पुज्ने मेरो देश! अनि हामी पछि नपरे को त? खगेन्द्रले यस्तो लेखेका थिए ,’डा.बाबुराम भट्टराई “रअ” प्रमुख सामन्त गाेयल्सलाई सुटुक्क भेट्ने,सामन्त गाेयल्स बाबुराम भट्टराईका देहमा सुटुक्क काेराेना भाइरस सल्काउने! अनि यता बाबुराम आइसाेलसनमा,उता सामन्त आइसाेलेसनमा। देहमा भाइरस सल्काइनु सामान्य क
एक पछि अर्को जटिलता थपिदा, प्रचण्ड र ओलि फुट्ने तिब्र सम्भावना…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : स,त्तारुढ नेपाल क,म्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुनः वि,वादमा अल्झिएको छ । पार्टीभित्र बढ्दो विवादसँगै को,रोना महा,मारीको बहानामा कात्तिक १५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि अ,निश्चित भएको छ । नेकपामा यतिवेला भित्र-भित्रै अधिकारकै बाँडफाँटको कुरालाई लिएर भुसको आ,गो जसरी वि,वाद बढ्न थालेको छ । भदौ २६ गते सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले कात्तिक १५ गतेदेखि १७ गतेसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तय गरेको थियो । यसलाई सचिवालय बैठकले पनि अनुमोदन गरेको थियो । तर, अध्यक्षद्वयबीच पुनः चिसोपना बढेपछि नेकपाको ठूलो इकाई केन्द्रीय कमिटी अ,निश्चित जस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अल्पमतमा पर्ने भयका कारण बैठक अ,निश्चित पारेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नि,कटहरु बताउँछन् । अध्यक्ष ओली को,रोना म,हामारीलाई देखाउँदै बैठक नबोलाउने पक्षम
रअ’ प्रकरणले नेकपा वि’वाद ‘फाइट टू फिनिस’तर्फ : ओलीको सन्देश प्रचण्डद्वारा अस्वीकार…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अन्य नेतालाई जानकारी नदिइकन कुटनीतिक म'र्यादाविपरित भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेपछि नेकपाभित्रको विवा'द उत्कर्षमा पुगेको छ । मर्यादाविपरित ‘रअ’ प्रमुखसँग ओलीले बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेपछि अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डको दूरी बढेको छ । मंगलबार बेलुकीदेखि अध्यक्षद्वयबीच भेटवार्ता र फोन संवाद हुन सकेको छैन । मंगलबार बेलुकी अध्यक्षद्वयबीच फोनमा एकप्रकारको झगडा जस्तै भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका अन्य नेतालाई पनि जानकारी नगराएर भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाएर भेटवार्ता गरेपछि अध्यक्षद्वयबीचको दूरी थप बढेको छ । प्रचण्डले ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटवार्ता आपत्तिजनक भएको बताएका उनी निकट एक नेताले बताएका छन् । ‘रअ’
प्रचण्डलाई धोका दिएर मन्त्री बन्दै यी तीन पूर्वमाओवादी नेता !
काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंलगत्तै मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न लागेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले पार्टीको निर्देशन वा शीर्ष तहमा छलफल गरेर सहमतिमा मन्त्री थप्न लागेको नभई केहि पूर्वमाओवादी नेतालाई उपहारस्वरुप मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका तीन नेतालाई आफ्नो पक्षमा तानेर ओलीले सरकार र पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन लागेका हुन् । केही राज्यमन्त्री हटाउने र केही मन्त्रालय टुक्राएर भएपनि मन्त्रीको संख्या बढाउने योजनामा रहेको ओलीनिकट स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपाभित्र पछिल्लो समय बोलचाल समेत बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेतालाई मन्त्री पद देखाएर फकाउन थालेपछि यो समूह थप उत्तेजित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ओलीले सुरुमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई संघीय मन्
काठमाडौ : नागरिक अगुवाको एक समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्त'चर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेट आप'त्तिजनक भएको बताएको छ । २३ जना नागरिक अगुवाले शनिबार एक अपिल प्रकाशित गरी विदेशी जासुसी विभागका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले रातिको समयमा आफ्नै सरकारी निवासमा भेट्नु कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न नसक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशका उपयुक्त तहका अधिकारीहरूसँग भेट्न लगाएर अन्त्यमा शिष्टाचार भेट दिन आवश्यक भए सम्बद्ध सरकारी अधिकारी सहित शि'ष्टाचार भेट हुनु पर्नेमा सोझै जासुसी विभागका प्रमुखलाई त्यो पनि जुन समयमा, जसरी, जहाँ, जति समय देशको कार्यकारीले भेट गर्नु भयो त्यसलाई जसरी प्रतिरक्षा गरे पनि कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिंदैन’ अपिलमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुधबार राति रअका प्रमुख गोयलसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । विदेशी मुलुकको ग
Oct212020 by Nepal KhabarNo Comments
एनआईसी एशिया बैंकमा खाता बन्द गर्नेको लर्को, अहिले सम्म १३ लाख ग्राहकहरुले खाता बन्द गरिसके…कारण यस्तो छ हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : पछिल्लो समयमा एनआईसी एशिया बैंकबाट रकम झिक्ने र खाता बन्द गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । कतिपयले बैंकसँगको लफडा भोग्न र उ,जुरी हाल्न भन्दा खाता नै बन्द गर्ने सजिलो बाटो अपनाएका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार देशभरीका शाखाबाट गरी करिव १३ हजार ग्राहकले खाता बन्द गरेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकको रकम झिकेको समाचार आएपछि एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरु हच्किएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकका बिरुद्ध धेरै सुचनाहरु आएपछि र बैंकले रकम नै गायब बनाएको भन्दै ग्राहकले पीडा व्यक्त गरेपछि बैंकिङ खबरले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एनआईसी एशिया बैंकका विषयमा जानकारी लिने जमर्को गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालसम्म उक्त बैंकका बिरु'द्ध करिव ३ सय उजुरी परेका छन् । ग्राहकहरुले आफू ठगीएको महसुस गरेपछि उक्त बैंकबाट खाता बन्द गर्न थालेका हुन् । हरेक दिनजसो एनआईसी एशिया बैंकका बिरु'द्ध मु'द्धाहरु पर्न था
Oct202020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौँ : बालुवाटारकाे ललिता निवास (सरकारी) जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्व-उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। साे प्रकर'णकाे छा'नबिन भइरहेकाले सम्पत्ति राेक्का गरिएकाे बताइएकाे छ । सम्पत्ति शु'द्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले गच्छदारकाे काठमाडौं, सुनसरी र मोरङमा रहेकाे जग्गा-जमिन लगायत सम्पत्ति रोक्का गरेको हो । साे प्रक'रणमा मु'छिएका अ'ख्तियार दुरु'पयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको सम्पत्ति पनि यसअघि नै रोक्का गरिसकिएकाे छ । विभागले नेता गच्छदारसहित बालुवाटारकाे उक्त जग्गा हि\_नामिना प्र'करणमा मु'छिएकाहरू सबैमाथि सम्पत्ति छा'नबिन गरिरहेको जनाएकाे छ । स्राेतका अनुसार विभागले उक्त प्रकरणमा संलग्न पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरूवि'रुद्ध छिट्टै मु'द्दा दा'यर गर्ने थालेकाे छ । साे जग्गा प्रक
एकैपटक ५ बच्चा जन्माउने आमाले बताइन् पि’डा, २ बच्चा रहेनन् ! ३ जना मात्रै नानी लिएर फर्किइन…हेर्नुहोस् । (भिडियो सहित)
काठमाडौँ : काठमाडैको थापाथली स्थित अस्पतालमा एक महिलाले ५ शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । नुवाकोटकी २८ वर्षिया सोमिका तामाङले एकै पछक पाँच शिशु जन्मा'एकी हुन् । अस्पतालमा उनको शल्य'कृया गरी ५ शिशु निकालिएको छ । तर पाँच शिशुलाई जन्मदिएपनि दुई शिशुको मृत्यु भएको छ । डिस्चार्ज भएकी सोमिकाले ५ शिशुलाई जन्मदिएपनि घर फर्किने बेला तीन शिशुमात्र लिएर फर्किएकी छिन् । पाँचमध्ये एक शिशु मृत जन्मिएको थियो । जीवित जन्मिएकामध्ये ८ सय ग्रामको शिशुको भेन्टि'लेटरमा राखी उपचार गर्दैगर्दा आइतबार राती मृ'त्यु भएको उपचारमा संलग्न डा.कीर्तिपाल सुवेदी जानकारी दिए । अरु ३ शिशु र आमाको अवस्था सामान्य रहेकाले अप्रशेन गरेको सात दिनमा हिजो डिस्चार्ज गरिएको उनले बताए । महिना पुग्नु अगावै महिलालाई सुत्केरी वेथा लागेको थियो । गर्भको आठ महिनामै सु'त्केरी बेथा लागेपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । चिकित्सकले सोमिका